अचम्म छ भूतलेखकको नालिबेली - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
अचम्म छ भूतलेखकको नालिबेली
स्कुले जीवनमा मैले थुप्रै साथीहरुको प्रेमपत्र लेखिदिएको छु । अरुको प्रेमपत्रको जवाफ लेख्दिने काम म चिया, नास्ता र मित्रताका लागि गर्दिन्थे । साथीको प्रेम आफूले महसुस गर्नुपर्ने । साथीको प्रेमिकाको अदा आँखामा राखेर कल्पिँदै शृङ्गारसरमा लेख्नुपर्ने । अहिले यदाकदा अरुको लेख, फुटेज, सूचना मिलाइदिने वा लेख्दिने गर्छु । म अवश्य चाहन्छु कि म अरुका लागि लेख्ने बन्न सकुँ । तर, भरपूर आत्मविश्वास अझै छैन । चानचुने सीप र दक्षताले सो बन्न सकिँदैन । पैसावालहरुले नाम र चर्चाका लागि भाडाका लेखकलाई मनग्य पैसा तिर्ने गर्छन् । भाडामा बिक्नु भनेको व्यावसायिक बनेको प्रमाण हो ।
नेपालका उद्योगपति, व्यापारीहरुले बेलाबेलामा किताब छापेको खबरहरु सुन्छौं, देख्छौं । कलाकारहरुले पनि किताब लेखेका छन् । आम मानिसले विश्वास गर्दछन् कि छापिएका किताबहरु उनीहरु आफैंले लेखेका होलान् ! तर होइन । पर्दा पछाडिका लेखक अर्कै हुन्छन् । अमेरिकामा सबै ठूला नेताहरुले भाषण अरुलाई लेखाउँछन् । जसलाई ‘घोष्टराइटर’ अर्थात् भुताहालेखक भनिन्छ । संसारमा सबैभन्दा बढी भूतलेखक भएको देशमा भारत, चीन र अमेरिका पर्दछन् । पत्रपत्रिका, अनलाइन र रेडियोमा विज्ञापन नै छापेर आफूले कसैका लागि किताब लेखिदिने बताउँछन् । आजकल बिगबिगी र चर्चा मात्र होइन, मनग्य पैसा कमाउने पेशामा ’घोष्टराइट’ पनि पर्दछ । घोष्टराइटिङ दुई प्रकारले गर्दछ– आंशिक र पूर्ण । कसैले आफैँ येनतेन कनिकुथी आफैँले लेख्छन् अनि भाषाशैली, व्याकरण र रोचक इत्यादि बनाउन घोष्टराइटर लगाउँछन् । कसैले विषयबस्तु, आफ्नो रुची, व्यक्तिगत कथा सुनाउँछन् र सोहीअनुसार लेख्न लगाउँछन् । विश्वव्यापी ट्रेण्ड के छ भने घोष्टराइटरले शुरुमा नै धेरैजसो रकम लिन्छन् र समयमा सक्छन् । कन्टेन्टदेखि कभर डिजाइनसम्म घोष्टराइटिङ बिजनेस हाउसले नै गर्ने हुँदा काम द्रूत हुन्छ । तर सम्झौता गर्दा नै नाम र गोपनीयताको शर्तहरु उल्लेख गरेका हुन्छन् । तपार्इंले नपत्याउँदो मानिसले किताब छाप्यो भने सोच्नुस्, घोष्टराइटर हायर गरेछ । जुन अमेरिका युरोपका लागि सामान्य मानिन्छ । भारतमा सबैभन्दा बढी घोष्टराइटरले लेखेको किताब छापिने तथ्याङ्कले बताउँछ ।
बाराक ओबामाको वाककला श्रवणीय छ । लेखनशैली तारिफयोग्य छ । के तपाईंलाई लाग्छ ओबामाले बोलेका सबै उनकै वाक्यहरु हुन् ? होइन । सन् २०१३ सम्म ओबामाको भाषण जोनाथन फेब्रेले लेख्थे । ओबामा आफैंमा प्रोफेसर भएकाले कुरा मिलाउन खप्पिस त थिए नै, यद्यपि, फेब्रेको सहयोग लिन्थे । त्यसो त ओबामाको ‘ड्रिम्स फ्रम माई फादर’ पनि घोष्टराइटर विलियम ऐयर्सले लेखिदिएको भनिन्छ । यद्यपि, अमेरिकाका लागि यो अपराध होइन ।
नेपालमा पनि हालै मनीषा कोइरालाले लेखेको ‘हिल्ड’ नामक किताब, हरिवंश आचार्यको ‘चिना हराएको मान्छे’, वसन्त चौधरीको संवाद आदि किताबहरु आंशिक रुपमा घोष्टराइटरले लेखेका हुन् भनिन्छ । अधिकांश लेखकले किताब लेखिसकेपछि ह्रस्वदीर्घ, व्याकरण, अनुच्छेद मिलाउन पाण्डुलिपी नै भाषाविज्ञलाई दिने गर्दछ । लेख्न सबैले सक्छन् तर पठनीय लेख्न कमैले सक्छन् । आत्मकथा अर्थात् अटोबायोग्राफी घोष्टराइट गराउनेले भने लामो समय संगत गरेर, घण्टौंघण्टा गफिएर पात्रको जीवन महसुस गरेर लेख्न शुरु गर्दछ । लेख, आलेख, कथा, पटकथा, उपन्यास, निबन्ध, समालोचना, नियात्रा इत्यादि लेख्ने काइदा हुन्छन् । पाठकलाई जनजिब्रो र आँखामा बग्ने खालको वाक्य संरचना भएन भने पठनीय पुस्तक बन्दैन । १०–१५ हरफ लेख्नु भिन्नै कुरा हो भने निष्कर्षसहितको पूर्ण लेख लेख्नु फरक चिज हुन् ।
आजकल उपन्याससमेत घोष्टराइटरलाई लेखाएर आफ्नो नाम छाप्ने चलन नेपालमा पनि बढेको छ । भनिन्छ, नेपालका चलेका लेखकहरु पनि पर्दा पछाडि भूतलेखकको काम गर्छन् । कुनै दिन सुबिन भट्टराई, सरुभक्त, मञ्जुश्री थापा, बुद्धिसागर, अमर न्यौपाने, कविताराम श्रेष्ठ, गिजु भई, खगेन्द्र संग्रौला, नयनराज पाण्डे जस्ता लेखकहरुले आत्मकथा लेखे भने यस विषयमा केही अंश पक्कै लेख्लान् । योग्यता क्षमता बजारिया बनेको परिप्रेक्ष्यमा एउटा सत्य स्वीकारौं, पैसाले किन्न नसकिने दुई चिज बचेको छ– आमाबाबु